Showing ६१-७० of ३७१ items.
धरान/कथाकार दाजु गुरुङको डायस्पोरिक कथा सङ्ग्रह ‘टाँकीका फूलहरू’ माथि धरानमा शनिबार विमर्श गरिएको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा गरिएको विमर्शमा वक्ताहरूले कथा सङ्ग्रहमा विदेशमा रहका नेपालीको ‘मनोविज्ञान’ लाई समेटेको बताए । समालोचक रामजी तिम्सिनाले सङ्ग्रहमा तीन वटाबाहेक अन्य सबै अकथा भएको टिप्पणी गरे । भने, ‘मोनिका, बाटो विराएको मान्छे र मिलेनियमबाहेक बाँकी कथा, कथा होइनन् । धेरै कथामा प्लट नै छैन ।’ तर, सङ्ग्रहमा रहेका सबै कथाको केन्द्रमा मनोविज्ञान रहेको उनले बताए । प्रा.डा. रमेश घिमिरेले हङ्कङ बुझ्न, त्यहाँको समाज बुझ्न कथा सङ्ग्रहले मद्दत गरेको बताए
प्रकाशित मितिः भदौ २२, २०७६
समसामयिक: को हुन् मोतीराम भट्ट ?
युवा कवि कवि मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका अमर तारा हुन् । वि.सं. १९२३ भाद्रकृष्ण औंसी अर्थात् कुशे औंसीका दिन काठमाडाैंको भोंसी टोलमा जन्मिएर भारतको वाराणसीमा गई शिक्षादीक्षा प्राप्त गरेका मोतीराम भट्ट थोरै समयमा पनि धेरै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सफल प्रतिभा हुन् । उनी आफूमात्र नेपाली सााहित्यका साधक बनेका होइनन् उनको सरसङ्गतमा आएका सबैेलाई भाषा साहित्यसेवामा लगाउनसमेत मोतीराम सफल भएका थिए । नेपालीमा साहित्य लेखनको परम्परा नै नबनेका समयमा उनले विद्यार्थीकालदेखि नै नेपाली भाषामा कविता, गीत, गजल, जीवनी, नाटक आदि लेखे र लेख्ने अभियान चलाए । उनले कविता लेख्ने क्षमता भएकाहरूलाई लेख्न र सुनाउन प्रोत
ग्यालरीमा इण्डोनेशिया र नेपाली कलाकार
देउराली । कला र कलाकारहरुलाई कुनैपनि देशको सीमारेखाले बाँध्न सक्दैन । किनकि कला र कलाकारहरु एक देशका मात्र सम्पती हुँदैनन् । कला विश्वभाषा हो भने कलाकार सबै देश र भूगोलका हुँन् । भन्ने यथार्तवोध गर्दौ मिथिला कला दिर्धा ठमेलमा , इण्डोनेसिया र नेपाली कलाकारहरुको सामुहिक कला प्रर्दशनी चलिरहेछ । भदौ ११ गतेबाट सुरु भएको उक्त दुई देशका कलाकारहरुको सामुहिक कला प्रर्दशनीकोे उद्धाटन नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपती गोपाल चित्रकार गरेका हुन् । ३ इण्डोनेसियन र २५ नेपाली कलाकारहरुको उक्त प्रर्दशनीमा विविध शैली, माध्यम, विषय र भूगोलमा रहेर बनाइएका ५० भन्दा वढि चित्रहरु राखिएको छ । प्रर्दशनीमा
सायनलाई २ लाखको पद्यश्री पुरस्कार
पथरीशनिश्चरे । मोरङको पथरी शनिश्चरेका साहित्यकार रमेश सायनलाई २ लाख रुपैयाँ राशीको पद्यश्री साहित्य पुरस्कार प्रदान हुने भएको छ । खेललाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठान रत्ननगर चितवनले ०७५ सालको पद्यश्री साहित्य पुरस्कार सायनको निवन्धकृति ‘छुटेका अनुहारलाई प्रदान गर्ने भएको हो । युवा साहित्यकार सायनले आफैंले भेटेर छुटेका अनुहार र तिनीहरुको मनोवृत्ति गहिराईसम्म पुगेर कलात्मक हिसावले सुक्ष्म चित्रण गरेका छन् । पथरीशनिश्चरे ४ का उनको पहिलो पुस्तक कृति कविता संग्रह ‘भागेर भूगोलभरि’ ०७० मा प्रकाशित भएको छ । नेपाल मेडिकल साहित्य परिवारले सो कृतिका लागि सोही वर्ष साहित्य पर
कर्ण दास र मीरा राणाले भावुक बनाए
जिन्दगीको के भरोसा ... यो गीत डेढ दशकअगाडि निकै लोकप्रिय गीत हो । गायक कर्णदासले बिहीबार सुन्दरहरैंचामा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त गाउँदा दर्शकहरू निकै भावुक बने । त्यसैगरी मीरा राणाको ‘तिमीलाई रुवाउने मेरो धोको होइन’ गीतले पनि दर्शकहरूलाई थप भावुक बनायो । मोरङको सुन्दरहरैंचामा आयोजित नझरेका फूलहरू पलेटी साँझ कार्यक्रममा गायक कर्ण दास र गायिका मीरा राणाले विभिन्न गीत गाए । पलेटी साँझको १५ औं शृङ्खला अन्तर्गत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । ‘साहित्य, कला र सङ्गीतको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि स्रष्टा सम्मान’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा गाय
पथरीशनिश्चरे । भारतको विहार हिन्दी साहित्य सम्मेलनले सिक्किमेली दुई युवा साहित्यकारलाई ‘शताब्दी सम्मान’ प्रदान गरेको छ ।अभियान साहित्य समिति राङ्काका अध्यक्ष एवम् हिन्दी साहित्य सेवा समिति सिक्किमका कोषाध्यक्ष अर्जुन ‘यावा’ र हिन्दी साहित्य सेवा समिति सिक्किमकी साहित्य सचिव एवम् मानव संसाधन विभागकी डा. छुकी लेप्चालाई ‘शताब्दी सम्मान’ द्वारा सम्मानित गरिएको हो । यावा स्थानीय सक्रिय पत्रकारसमेत हुन् । केन्द्रीय विधि मन्त्री रविशङ्कर प्रसादको प्रमुख आतिथ्य तथा चाणक्य राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालयकी कुलपति मृदुला मिश्र, विश्वविद्यालय सेवा आयोग विहारका पूर्वाध्यक